Goormaad Amaahan Kartaa Oo Isticmaali Kartaa Sawir Khadka Tooska ah? | Martech Zone
Sabtida, Maarso 10, 2018 Axad, Abriil 1, 2018 Douglas Karr
Meherad aan lashaqeeyo ayaa dhowaan soo cusbooneysiisay barta Twitter-ka oo ay ku jirto sawir gacmeed qosol badan oo xitaa astaantoodu ku jirto Waan yaabay maxaa yeelay uma maleynaynin inay kiraysan doonaan kartooniste. Marka, waxaan u diray warqad qoraal ah wayna la yaabeen… waxay kiraysteen shirkad baraha bulshada ka hawl gasha oo kobcisa raacidooda wayna soo dhajin doonaan.
Wadahadal kadib shirkadda, aad bay uga sii naxeen markay ogaadeen in sawir kasta, meme kasta, iyo kartoon kasta oo la wadaago la sameeyo iyada oo aan fasax laga haysan shirkadda. Waxay ceyriyeen shirkadii oo ay dib ugu laabteen oo ay ka saareen sawir kasta oo khadka tooska ah lagu wadaago.
Tani maahan wax aan caadi ahayn. Waxaan si isdaba joog ah u arkaa tan iyo marar badan. Mid ka mid ah macaamiishayda ayaa xitaa loogu hanjabay dacwad kadib markii ay isticmaaleen sawir mashiinka raadinta uu ku sheegay inuu xor u yahay isticmaalka runti ma ahan. Waxay ahayd inay bixiyaan dhowr kun oo doolar si dhibaatada looga baxo.
Ganacsiyada ayaa ugu dambi badan wax ka bedelida sawirada la xaday ee xayeysiinta, iyadoo 49% dadka wax qora iyo kuwa isticmaala baraha bulshada ay xadaan sawirada, sidoo kale 28% ganacsiyada
Waa tan xadgudubkii ugu dambeeyay ee shirkad adeegsatay sawirkeyga istuudiyaha Podcast, laakiin waxay ku dul dahaadheen astaantoodii
Marka la eego maalgashiga aan ku sameeyay istuudiyaha iyo sidoo kale sawirka, waa wax lagu qoslo in qof uun qabsado oo uu ku dul tuuro astaantiisa. Waxaan u diray ogeysiis ururada oo dhan.
Nabadgelyada maskaxda, waxaan had iyo jeer ku sameynaa mid ka mid ah waxyaabaha soo socda boggayaga iyo macaamiisheenna:
I shaqaaleeya sawir qaadayaasha oo aan hubiyo in ganacsigeygu uu leeyahay xuquuq buuxa oo aan ku isticmaali karo kuna qaybin karo sawirrada aan u kireeyo si aan u qaato xaddid la'aan. Taasi waxay ka dhigan tahay inaan u isticmaali karo goobahayga, goobo badan oo macmiil ah, waxyaabo daabacan, ama xitaa kaliya inaan siiyo macmiilka si uu u isticmaalo si kasta oo ay iyagu jeclaan lahaayeen. Kireynta sawir qaade kaliya faa iidada shatiyeynta, sidoo kale saameyn la yaab leh ayey ku leedahay goobta. Ma jiraan wax la mid ah degel maxalli ah oo leh astaamo deegaan ama shaqaalahooda ku jira sawirradooda internetka. Waxay shaqsiyeynaysaa bogagga waxayna ku dareysaa heer wax ku ool ah.
I xaqiiji shatiga sawir kasta waan isticmaalnaa ama u qaybinaa. Xitaa bartayada, waxaan xaqiijinayaa inay jiraan raad raac warqad ah oo sawir kasta ah. Taas macnaheedu maaha inaan bixinno sawir kasta, in kastoo. Tusaale ahaan waa sawirka hoose ee hoose - waxaa loo isticmaalay ogolaansho sida ku qeexan dhajintii asalka ahayd Berify.
Berify waa raadinta muuqaal gadaal ah oo kaa caawinaya inaad hesho sawiro iyo fiidiyowyo la xaday. Waxay leeyihiin algorithm u dhigma sawirka waxayna ka raadin karaan in ka badan 800 milyan oo sawir oo ay la socdaan xogta muuqaalka dhammaan matoorada waaweyn ee raadinta sawirrada.
Marka ay timaado sawir qaadista iyo sawirada la xaday, dadka isticmaala internetka - ee sii adkeeya xatooyada - waxay doorbidaan inay ka fikiraan dambi dhib la'aan ah oo aysan u baahnayn wax raali gelin ah. Si kastaba ha noqotee, sawir qaadayaasha xirfadleyda ah iyo hiwaayadleyda waxay ogyihiin xaqiiqda - ka sokow inay yihiin anshax xumo, xatooyada sawirku waa sharci darro waana qaali. Berify
Waa tan faahfaahinta buuxda, Muuqaal kooban oo ka mid ah Xatooyada Sawirka Internetka. Waxay sharraxeysaa dhibaatada, sida xuquuqda iyo adeegsiga caddaaladda ay dhab ahaan u shaqeeyaan (taas oo shirkado aad u tiro badan ay ku takri-falaan), iyo waxa ay tahay inaad sameyso haddii aad aragto in sawirkaaga la xaday.
Tags: berifycopyrightxatooyo sawiradeegsiga sawirkaadeegsiga sawirkainfographicxatooyada sawiradawaxyaabaha la xaday